Sunday August 25, 2019 - 13:33:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xarakada Jihaadiga Taliban ayaa kusii xididaysanaysa wadanka Afghanistan xilli uu sare usii kacayo khasaaraha nafeed ee ciidamada Mareykanka kasoo gaaraya dagaalka wadankaasi ka socda.
Wararka Afghanistan ka imaanaya ayaa sheegaya in weeraro 5-tii maalmood ee lasoo dhaafay dhacay lagu dilay askar American ah, war qoraal ah oo kasoo baxay Ururka NATO ayaa lagu sheegay in weerar isbuucii lasoo dhaafay dhacay lagu dilay ugu yaraan 2 askari.
Weerar shalay ka dhacay gobolka Baarawaan ee dhaca waqooyiga Afghanistan ayaa lala eegtay kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada Mareykanka ee qeybta ka ah soo duulayaasha Mareykanka.
Dhinaca kale Taliban ayaa iclaamisay in ay soo gaba gabaysay tababarro khaas ah oo ay qaateen ciidamadeeda khaaska ah, sawirro lagu baahiyay Website-ka rasmiga ah ee Imaarada ayaa muujinayay boqolaal dagaalyahan oo tababarro adag qaadanaya.
Mucaskarkan oo loogu magac daray Salaaxudiin Al Ayuubi waxaa ka qalin jebiyay guutadad istish-haadiyiinta Imaarada Islamaiga ah, warbixinno ay soo saareen hay'ado reergalbeed ah ayay ku sheegeen in 70% dhulka Afghanistan uu ku jiro gacanta Imaarada Islamaiga Afghanistan oo ah Taliban.